Allgedo.com » Kulan muhiim ah oo ay maanta Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Muqdisho ku qabtay (Sawiro)
Kulan soo dhoweyn ah oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga Caalamiga ay maanta ugu sameysay Safari Hotel ee Muqdisho qaar ka mid ah Diblomaasiyiinta ka howlgala Safaaradaha iyo Qunsuliyadaha Soomaaliya ay ku leedahay dibadda, kuwaasoo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii wasaaraddu ay u dirtay fariin ku baaqeysay inay Xarunta ku yimaadaan ugu dambeyn 10-ka bishan January, ayaa waxaa halkaasi hadalo ka jeediyay Mas’uuliyiin kala duwan oo Wasaaradda ka tirsan.
Ra’iisul wasaare kuxigeenka Ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga Marwo Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa soo dhoweyn kadib waxa ay tiri “Diblomaasiyiintu waa inay la jaan-qaadaan isbadalka cusub ee dalka ka socda, wasaaradeeduna waxa ay aheyd wasaaradaha ugu sareeya geeska Afrika, waxaanu dooneynaa inaan baabi’inno magac xumada Soomaalida loogu yeero ee ah argagaxiso iyo burcad badeed.”
Wasiirku waxa ay intaa ku dartay “Guddi Diblomaasiyiin ah ayaan u xilsaaray dib u habeynta howlaha Wasaaradda, waxaana ay dib u qaabeynayaan howlaha shaqo iyo shaqaale ee Gudaha iyo Dibadda, waxa ayna dhaqan gelinayaan Sharciga shaqada Dibadda “ Foreign Service Law”, safaaraduhuna waxa ay ka mid yihiin cududa dowladda iyo indhaheeda, waa inaan ka soo dhalaalnaa kaalinteena”.
Waxaa kaloo xafladda ka hadlay Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Maxamed Shariif Maxamuud , Gudoomiyaha Guddiga dib u habeynta Danjire Yuusuf Xasan ibraahim (Yuusuf Dheeg) iyo Xubnaha Guddiga ee kala ah Danjire Maxamed Muuse Tareey iyo Danjire Maxamed Jaamac Cali (MJ), waxa ayna ka hadleen howsha loo igmaday iyo guulaha ay rajeynayaan mustaqbalka dhow, waxaana goob joog ka ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cabdidaahir Cabdiraxmaan Cabdi.
2 Jawaabood " Kulan muhiim ah oo ay maanta Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Muqdisho ku qabtay (Sawiro) "
Gabadha wasiirada arrimaha dibedda oo sheegatay Somaliland inay goosatay oo ay isu soo taagtay madaxbanaanideeda haka sugina inay wax hagaajiso oo waxay iska horkeenaysa koonfurta somaliya oo doonaysaa inay dhibaato ka dhex dhaliso. War hooy waa la qaybsanayaa jagooyinka safaaradaha arrimaha dibedda iyo safiiradaba ha is waalin ee meel joog.
xaaji xawaadle says:
waxaajiray safiiro iyago taabsi kuhaysta safaaradeaha oo horay looga qaadiwaayay eemaxaa laga yreelayaa